एउटै औषधिको मूल्य २५ करोड - bampijhyala.com
Home > पत्रपत्रिका > एउटै औषधिको मूल्य २५ करोड
१० श्रावण २०७८, आईतवार ०७:५१ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । एउटै औषधि कतिसम्म महँगो होला ? सुन्दा अपत्यारिलो लागे पनि बास्तविकता हो– जोल्जेन्स्मा नामको औषधिलाई २१ लाख २५ हजार अमेरिकी डलर (२५ करोड २८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी) पर्छ। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए) रोगका लागि यो दिइन्छ। भैरहवाकी २२ महिने सियोना श्रेष्ठ उक्त औषधिबाट उपचाररत छिन्। यी सानी नानीको महँगो उपचार यति बेला सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा छ। एलिना गुरुङ श्रेष्ठ र डा. सन्दिप श्रेष्ठकी छोरी एलिनाको दुबईमा उपचार भइरहेको छ।
ऐतिहासिक पर्व इन्द्रजात्रा अवधिभर काठमाडौँका भित्री क्षेत्रमा सवारी निषेध १० श्रावण २०७८, आईतवार ०७:५१
निक्षेपको ब्याजदर नै दोहोरो अंकमा १० श्रावण २०७८, आईतवार ०७:५१
सम्पादकियः विशेष आज असोज १, बाँपिझ्याला अनलाईन पत्रिका संचालनको एक बर्ष १० श्रावण २०७८, आईतवार ०७:५१
पानी गौँथलीको ठूलो बथान भेटियो १० श्रावण २०७८, आईतवार ०७:५१
सम्पादकियः विशेष थनु असोज ला तिथी १, बाँपिझ्याला अनलाईन पति हिल्केय दाक्षि दँ १० श्रावण २०७८, आईतवार ०७:५१